War Saxaafadeed Ka soo Baxay Wasaaradda Maaliyadda DKM .
Waxan idinla socodsiineynaa in wararka ku soo baxay Hiiraan-online 27 June, oo sheegayey in Wasiirka Maaliyadda Dowladda KMG ah uu sheegay in ay 3.5 milyan oo Dollar ka maqan tahay qasnadda Dowladda uu yahaya war been abuur ah, oo sal iyo raad aan lahayn.
Dowladda dhexe ma laha khasnad dhexe oo ay lacag ugu jirto, mana jirro mas'uul ka tirsan Dowladda KMG ah oo si gaar ah ugu takri falay lacagta Dowladda. Warkan waxa uu ka mid yahay aaladaha lagula dagaalamayo Dowladda KMG, lana doonayo in la isaga hor keenno mas'uuliyiinta
Dowladda, taasoo loola jeedo in lagu hor istaago geedi socodka nabadeed ee ay waddo Dowladda KMG ah.
Mas'uuliyiinta Dowladda KMG waa ay ka gudbeen heer ay iska horyimaadaan ama ay isku khilaafaan wax ay qoreen kuwa aan waxba ka aqoon nidaamka saxaafadda balse, ku fikiraya sidii ay nolol maalmeed ku helilahaayeen. Khilaafka u dhexeeya Wasaarada Maaliyadda iyo Bankiga Dhexe ma aha khilaaf danaysi ee waa mid la xiriira arimo maamul.
Sida aan wada ognahay Dowladda KMG ah waxay ku jirtaa heer dhismo mana loo dhamaystirin hay'adihii kaabayay dowladda, sida Xisaabiyaha Guud iyo Hantidhowrka Guud oo mas'uulayadoodu tahay hubinta iyo la socodka hantida Dowladda. Sidaa darteed, labadaas hay'adood oo aan wali howl gelin darteed si ay ula socdaan howlmaalmeedka Hey'adaha Dowladda ayaa waxay dhalisay in howlihii la xiriiray kharash bixinta ay adkaadaan sidii loo fulin lahaa.
Haddii aan u soo laabto arinta sida beenta ah ay u fasireen saxaafadda gudaha qaarkood oo la xiriirta lacagaha lagu maamulayo kharashyada kala duwan ee Dowladda oo ay ku sheegeen 3.5.Milyan oo aan la garanaynin meel ay ka soo xigteen ayaan waxaan halkaan ku caddeynaynaa sida dhabtu tahay;
1. Wasaaradda Maaliyadda waxay diyaarisay Jeeg ay ku qoran tahay lacag SR. 3,750,000 una diganta US $ 1,000,000 oo aan u dhiibay Ra'iisal Wasaaraha si looga soo saxiixo Guddoomiya Bankiga Dhexe oo loogu talagay in lagu fuliyo howlaha kala duwan dowladda ee ma aha jeegga uu Ra'iisal Wasaaruhu si gaar ah u qaatay. Jeeggaas waxaa ku saxiixnaa Wasiirka Maaliyada, lamana qaadan karo iyadon saxiixyadiisa loo dhamaystirin. waxaa laga hor caddeeyay Golaha Shacbiga sababta uu Jeeggaas u taagan yahay, waa arin la xiriirta xagga maamulka.
2. Waxaa kale oo iyadana jirta Jeeg lagu qoray magaca Bankiga Dhexe lacagtiisuna ay dhan tahay SR. 2,737,500 una dhiganta US $ 730,000 looguna talagay in lagu bedelo lacagta Shilling Soomaliga ah ee dowladdu xaraashka ku iibsatay iyadoo shirkadda Barakaat ay dadkii sariflayaashii laga iibsaday Shilling Soomaliga siisay qayb ka mid lacagtodii iyagoo sabab uga dhigay in aysan qaadan jeegga ku qoran magaca Bankiga Dhexe .
3. Sidoo kale, Golaha Wasiirada waxay go'aansadeen in mas'uuliyiinta ka tirsan labada Gole (Baarlamaanka & Wasiirada) ee degen hotelada la dejiyo guryo ugu dambeyn June 10, 2001.
Waxaa loo qoondeeyay lacagtii lagu fulin lahaa mashruuca dejinta mas'uuliyiinta labada Gole ayaa waxay Wasaaradda Maaliyadda ka soo hormarsatay Barakat Bank lacag dhan US $ 300,000. Mana jirto lacag si gaar ah uu u codsaday Wasiirka Maaliyadda.
Haddaba, iyado laga amba qaadayo arimahii been abuurka ahaa waxaay Wasaaradda Maaliyadda oo wakiil ka ah maaliydda dalka caddeynaysaa in uusan jirin mas'uul Dowladda KMG ka tirsan oo lunsaday ama ku takri falay lacagta khasnadda Dhexe ee Dowladda. Wasaaradda Maaliyadda waxay diyaar u tahay in ay ka qanciso ciddi shaki ka qabto in si xun loo maamulay maaliyadda dowladda.
Haddaba sida aad la wada socotaan 10 kii sano ee la soo dhaafay oo lagu jiray dowlad la'aanta, dadka waxay ilaabeen sharciga iyo kala dambeynta iyadoo qof waliba uu sameeyo waxa isaga raali galiya isagoon u eegin xagga sharciga iyo dhibka ay u keeni karto guud ahaan shacabka. Dowladda ku meel gaarka ah waxay hadda ku guda jirtaa howlgalinta taabagalinta hay'adaha garsoorka iyo ciidamada amniga si ay u soo celiyaan sharciga iyo kala dambeynta.
Wasiirka Maaliyadda Dr. Axmed Sheekh Daahir.
Warkaasi wuxuu maanta kasoo baxay Xafiiska Wasiirka Maaliyadda ee Dowladda KMG ah Mudane Sayid Axmed Sheekh Daahir.